iifom zokwenziwa kokutya kweentlanzi
Ioli yeentlanzi sisithako esitywiniweyo sivela kwintlanzi encinci yebony yentlanzi okanye iintlanzi ezincamathelayo njengeentlanzi. Iintlanzi zixinzelelwa phantsi ukukhulula ioli yeentlanzi, Iintlanzi ziye zigqitywe ukwenziwa zibe yintlanzi kusetyenziswa iindlela zokupheka nezomileyo.
Ioli yeentlanzi ingumthombo wamandla, kodwa okona kubaluleke kakhulu ibonelela ngoyena mthombo we-omega-3 fatty acids, eziyimfuneko kwiintlanzi kunye nasempilweni yomntu. Njengabantu, Uninzi lweentlanzi alunakuthetha-omega-3 okunamafutha acid emzimbeni, kungoko kufuneka bephekiwe kukutya kwabo (Umzekelo:. kwimeko yentlanzi ekhethiweyo, I-omega-3's ivela ekubandakanyeni ioli yeentlanzi kwiintlanzi ezincinci ze-bony okanye i-trimmings yeentlanzi ekudleni).
Intlanzi yentlanzi sisithako esine protein eninzi esenziwe kwintlanzi encinci yeebony okanye iintlanzi ezingaqhelekanga ezisetyenziselwa ukutyiwa ngabantu. Isetyenziselwa ekutyeni njengomthombo weprotein.
Ezi zithako zixutywe kumazwe aphesheya ezifana nePeru, Tshile, Ekhuwado, kunye namazwe e-SE aseAsia angeniswa e-Australia.
Iivithamini kunye neeminerals zongezwa kwizondawo ukuze uqiniseke ukuba intlanzi ifumana zonke izondlo eziyifunayo. Ezi iivithamini kunye neeminerals ezifanayo nezo zisetyenziswa kwizongezo eluntwini.
Iprotheni yemifuno kunye nezithako zeoyile
Izithako zemifuno enje ngengqolowa, isidlo se-lupine kunye ne-soya protein kugxilwe kwi-feeds njengomthombo weprotein. Ukutya kweentlanzi kwenzelwe ukufezekisa iprofayili ye-amino acid efanelekileyo, Kungoko ke kusetyenziswe umxube weeproteni zemifuno.
Ukufakwa kwengqolowa kunye ne-faba bean yimithombo ye-carbohydrate. I-carbohydrate ekwimo yesitatshi yaphuka iswekile kwaye isetyenziselwa amandla, enexabiso elilinganiselweyo lesondlo kuhlobo lwentlanzi enqwenelekayo. Endaweni yoko i-carbohydrate iyadingeka kwimveliso yokutya ukunceda ukubopha ipellet kunyekanye ukuze izinzise kwaye kungabi lula ukuwa xa isiya emanzini ngaphambi kokuba ityiwe. Ikwayimfuneko kuzinzo lwepellet ukunqanda nakuphi na ukwaphuka okanye uthuli olwenzeka xa ukutya kuziswa ngenkqubo yokutyisa kwiintlanzi., ukunciphisa inani lamasuntswana amancinci okungena angena emanzini kunye nokunciphisa ithuba lokukhutshwa kwesondlo esivela kwisitya singena emanzini ngaphambi kokuba intlanzi itye.
Iprotheni yezilwanyana zomhlaba kunye nezithako zeoyile
Izithako zezilwanyana zomhlaba ezisetyenziswa eScretting Australia zithathwa kuphela eOstreliya kwaye zivela kuphela kubathengisi abaqinisekiswe yi-Australia Renders Association (NGOKU) kwaye ii-AQIS zentengiso eyamkelweyo kumazwe angaphandle. Bakwaxhomekeke kwinkqubo yethu yokuvunywa kwabaxhasi kunye nophicotho olwenziwa rhoqo ngabameli beScretting. Izilwanyana ezisetyenzisiweyo zikhuliselwa ukutyiwa ngabantu; ke ngoko kuxhomekeke kumgangatho olungqingqwa kunye nolawulo lokhuseleko lokutya.
Izithako zeprotheyini yezilwanyana zomhlaba zikumthombo ophezulu weprotheni, Umzekelo, ukutya kwenkukhu kuneprofayile ye-amino acid efanayo neyeentlanzi, ukuyenza indawo efanelekileyo yokubambisa iintlanzi ekutyeni kweentlanzi kwizilwanyana ezixhamlayo ezifana nesalmon kunye ne-trout.
I-Astaxanthin yindawo yemvelo eyenzeka kwi-carotenoid ethi isalmon yasendle ikhuphe kwiicrusaceans abazityayo. Le carotenoid ke ibekwa phantsi kwizicubu zemisipha kwaye ihanjiselwe amaqanda ngexesha lomjikelezo wokuzala weesalmonids ezinkulu. I-Salmon ayinakho ukwenza i-astaxanthin ngoko kulimo lwasemanzini, i-astaxanthin ehambelana nendalo yongezwa kwisondli.
Itafile 1. Eminye imithombo yeProtein eVandlakanyiweyo okanye enakho ukuKhetha ngokuYinxenye okanye ukuTshintshwa kwesidlo seNtlanzi kwiZidlo zeZilwanyana zaselwandle
Ndisisidlo Iinkukhu ziveliswa yinkukhu Izinambuzane
Ukutya okuvuswayo Feather isidlo Iproteni enye yeseli
Isidlo selanga Shrimp kunye necrab isidlo Iiglasi
I-Oats groats Umgubo wegazi Iprotheni yegqabi
Ukutya okwenziwe ngeplastiki I-silage yeentlanzi Isilika yemifuno
Iintsana zevili Isidlo senyama IZooplankton (krill, njl.)
Iprotein (Uluhlu), %
Itafile 2 Ezinye iikhompawundi ezenzeka kwiiNkcenkceshelo ezaziwayo kunye / okanye eziLindelekileyo ezibangelwa kukuPhazamiseka kwemithambo yePhysical okanye ngenye indlela Ukulungisa ukukhula kweNtlanzi.
I-Glycosides Ingca kunye namagqabi
Iipytates Zonke izinto zokutya zezityalo
I-Mycotoxins (aflatoxin) Ukutya okusekwe kwinkohla kungenzeki ngokwendalo kodwa kuveliswa ziintsholongwane
I -cyclopropenoid enamafutha acid Ioyile eyosiweyo kunye nesidlo
I-Trypsin inhibitors Isidlo kunye nesidlo esidlwengulweyo
Mimosine Amagqabi (I-Leucaena leucocephala)
Iiglucosinolates Ukutya okuvuswayo
Haemoglutinins Isidlo seSoyabean
IGossypol Ukutya okwenziwe ngeplastiki
Iitannins Ukutya okuvuswayo
I-lipids ene-Oxidized kunye ne-polymerised Ukutya kwiintlanzi; inkukhu, isidlo se-krill
I-histamine kunye ne-putrescine Ukutya kwiintlanzi, ngokuyintloko i-tuna
IiNitrosamines Ukutya kwiintlanzi